Ingiriiska oo Lagu Cadaadinayo inuu Cunaqabatayn Saaro Sacuudi Carabiya – The Voice of Northeastern Kenya
Ingiriiska oo Lagu Cadaadinayo inuu Cunaqabatayn Saaro Sacuudi Carabiya
Star FM November 1, 2018
Xoghayaha waasaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska, Jeremy Hunt ayaa cadaadis lagu saaray inuu soo magacaabo guddi gaar ah oo eegaya in boqortooyada Sacuudi caraiya cunaqabateyn lagu soo rogay iyo in kale.
Mas’uulkan ayaa dilkii wariye Jamal Khashoggi ku tilmaamay mid lagu xumaado oo hanjabaad ku ah wariyaasha.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in hadii Sacuudiga lagu cadeeyo eedeymaha loo soo jeediyay ay ka dhalan karto saameyn aanan wanaagsanayn oo ku timaada xariirka kala dhexeya ingiriiska.
Dhanka kale dacwad soo oogaha guud ee Turkiga ayaa baaritaano la sameeyay kadib sheegay in 2-dii bishii hore gudaha qunsuliyadda boqortooyada Sacuudi Carabiya ee magaalada Istanbul lagu dhex ceejiyay wariye Jamal Khashoggi
Jamal oo ay xiligaasi dad ugu war dambeysay ayay xukuumada Riyaadh caalamka u sheegtay inuu ku dhintay dagaal ka dhex dhacay gudaha qunsuliyadda.
Hasa ahaate jawaabtaasi ayaanan u cuntamin qaar ka mid ah madaxda caalamka oo dalbaday in baaritaano madax bannaan la sameeyo.
Bayaanka ka soo baxay xafiiska dacwad oogidda Turkiga waxaa sido kale lagu xusay in dilka Jamal la soo qorsheeyay.
Wax yar un kadib markii uu gudaha u galay qunsuliyadda ayaa laga takhalusay.
Sido kale waxaa bayaankaasi qeyb ka ah in meydka suxufigan la jarjaray ceejinta kadib.
Turkiga ayaa dhanka kale sheegay in natiijo wax ku ool ah aynan ka soo bixin kulan socday saddex maalmood oo kala dhexeyay dacwad oogaha boqortooyada Saud Al-Mujab.
Jamal Khashoggi oo ahaa muwaadin u dhashay Sacuudi Carabiya ayaa faallooyin ku qori jiray wargeyska ka soo baxa Maraykanka ee Washington Post waxaana lagu xasuustaa inuu si weyn u dhaliili jiray hoggaanka boqortooyada in kastoo dadkii ay aad isugu dhawayeen ay ku tilmameen inaysan cadowtinimo ka dheehan qoraaladiisa.
← Haweenka Kuuriyada Waqooyi oo si Caadi ah loo Faraxumeeyo
(Dhageyso) Madaxweyne Uhuru oo u Riyaaqay Warbixin Bangiga Adduunka uu ku Ammaanay Qanacsiga Dalka →